Kyrgyzstan: Fitsapan-kevi-pirenena, vehivavy mpitsikilo tao amin’ny parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2018 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Deutsch, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Niresaka tamim-pivitrihana ny vokatry ny fitsapan-kevitra nasionaly notarihan'ny Ivon-toerana Repoblikana Iraisam-pirenena tamin'ny volana Mey 2007 ny tontolon'ny bilaogy Kyrgyzstan, izay mponina Kyrgyz 18 taona no miakatra teo ho eo amin'ny 1500 isa teo no nandray anjara tamin'izany fitsapan-kevitra izany.
Araka ny vokatry ny fanadihadiana, heverina fa olana goavana atrehin'i Kyrgyzstan ankehitriny ny tsy fananan'asa, ny fandrosoana ara-toekarena, ny kolikoly ary ny krizy ara-politika. Manahy mafy mikasika ny fandrahonan'ny ady, ny fitroarana, ny tsy fahatomarinan-toerana ara-toekarena sy ara-politika, araka ny asehoan'ny fitsapan-kevitra ny olona ao amin'ny firenena.
Navoaka tao amin'ny forum ireo fanamarihana somary ratsy manoloana ireo tondro tsara tamin'ny fanadihadiana momba ny toe-draharaha ao Kyrgyzstan.
Ohatra, mihevitra i IoLa fa nisy fiovana goavana ho amin'ny ratsy kokoa, na dia hita mampiseho fandrosoana sy fivoarana ara-toe-karena sy ara-tsosialy amin'ny ankapobeny aza ny fanadihadiana. Tsy miombon-kevitra amin'ny vokatry ny fanadihadiana sasantsasany koa i Zoltan :
Manontany tena aho hoe iza no nanoratra fa tsara kokoa ny fiainana amin'izao fotoana izao, mino aho fa nisy solombavambahoaka nanaovana fitsapan-kevitra!?!?!
Notarihan'ny gazety an-tserasera Rosiana “Novyi Region” ny fitsapan-kevitra iray hafa mahaliana. Mikendry ny hamantatra izay filoham-pirenena sexy indrindra tamin'ny Firaisana Sovietika teo aloha izany.
Amin'ireo filoham-pirenena 15, ny filohan'i Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev no hita fa filoham-pirenena sexy indrindra fahadimy. Hita ao amin'ny Svobodnoe Pokolenie (Taranaka Afaka) ny vondrona adihevitra mahaliana momba ity lohahevitra ity ary navoakan'i Mirsulzhan tao amin'ny neweurasia ny vokatry ny fanadihadiana voalohany.
Am-pahatsorana, manahy ny zava-misy aho fa tsy manana na inona na inona ireharehana afa-tsy ny fananahany ny filohantsika hajaina Salievich (Bakiyev, fanampin'anarana). Raha sexy izy – ahoana kosa i Babanov (solombavambahoaka)?
Tsy voafetra tamin'ny vokatry ny fanadihadiana ihany ny adihevitry ny tontolon'ny bilaogy; nahasarika ny sain'ny bilaogera ihany koa ny Failed States Index (Tondro momba ireo fanjakana tsy nahomby) navoakan'ny gazetiboky Fund for Peace sy Foreign Policy. Namoaka lahatsoratra momba ny vokatry ny filaharana i Asel ao amin'ny neweurasia sy Shannon ao amin'nyn nonpon, izay ahitana an'i Kyrgyzistan very toerana 13 tamin'ny #41. Izao no nolazain'i Shannon:
Etsy ankilany, nolazaina fa lavitra indrindra ny lavaka mangitsokitsoka i Kyrgyzstan, very toerana 13 tamin'ny #41. Mampahery kosa, fa ny fidinana dia noho ny fidinan'ny filaharana saiky manerana ny solaitrabe, na dia tena bitika tanteraka aza izany. Ny fahafahan'ny Kyrgyz mandositra ny firenena no toa antony lehibe mahatonga azy mijanona ho laharana ambonin'i Turkmenistan.
Miresaka hatrany momba ny olana ara-politika ankehitriny ny tontolon'ny bilaogy Kyrgyztani, ary tsy niavaka ny tapa-bolana lasa teo. Azo jerena ao amin'ny bilaogy samihafa ny adi-hevitra mafana momba ilay vehivavy mpitsikilo nogadraina, mpiasan'ny sampana gazety ao amin'ny parlemanta Kyrgyz, izay voalaza fa nampita vaovao tsiambaratelo tamin'i Shina.
Nilaza i Baisalov fa tsy misy velively ny fampahalalam-baovao tsiambaratelo ara-miaramila na ara-panjakana ao amin'ny parlemanta, raha nanamarika kosa i anonymous (tsy mitonona anarana) fa mety ho hetsika seraseram-bahoakan'i Sutalinov, filohan'ny Vaomieram-pirenena momba ny fiarovam-pirenena fotsiny izany, izay tia manao zavatra tahaka izany. Naryn Aiyp naneho hevitra tamin'ny fanambaran'i Djekshenkulov (Minisitry ny Raharaham-bahiny teo aloha) fa tsy ara-drariny ny manambara momba ny hetsika heloka bevava fitsikilovana alohan'ny fihaonamben'ny SCO any Bishkek amin'ity volana Aogositra ity.